तथ्यांक कि मिथ्यांक प्रतिव्यक्ति आय बढेको हावागफ
एक अर्थविदका अनुसार कुनै पनि आर्थिक सूचकांक सकारात्मक छैनन्, कुनै ठूलो आर्थिक प्रगतिको घटना पनि घटेको छैन तर नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय बढेर १४ सय डलरको गफ हाँकिएको छ । योभन्दा चमत्कार अरु के होला ? वातानुकूलिन कोठमा बसेर हजार भनिदिए पनि भयो, १४ सय भनिदिए पनि भयो । यथार्थमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कति छ ? कति हुनसक्छ ? यथार्थ कुरो भन्न सरकारले नै जिब्रो चपाउँछ भने अरुले के भन्ने ? कम्तिमा सरकारले त साँचो बोल्नुपर्छ ।
सबैलाई थाहा छ, १२ अर्बको बजेट भएको नेपालको ९ खर्बभन्दा बढी त व्यापार घाटा नै छ । यसको अर्थ उत्पादन र निकासी छैन, आयातमुखी अर्थतन्त्र छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय कसरी रातारात हजारौं डलरमा पुग्नसक्छ ? लाटोले पनि नपत्याउने कुरा गरेर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई छक्याउन खोजेको ?
रोजगारी छैन । उद्यम, व्यवसाय साँघुरिदैछ । युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि लामवद्ध छन् । रोजगार मन्त्री अव चीनलाई समेत युवायुवतीलाई काम देउ भनेर वैदेशिक रोजगारीको खोजिगर्न थालेको छ । यस्तो सरकारले प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ भनेर खोक्नुको अर्थ छैन । नेपालीको यथार्थ आर्थिक स्तर साह्रै तल झर्दैछ ।
त्यसमाथि कृषि उत्पादनसमेत खस्केको छ । सिंगो पहाड नांगै छ, खेती गर्ने श्रमशक्ति नै छैन । पहाडमा बुढाबुढी र केटाकेटीमात्र छन् भने मधेसका युवाहरु पनि धमाधम विदेशीन थालेका छन् । मधेसमा पनि श्रमशक्तिको कमी हुन थालिसकेको छ । वर्षको ९ अर्वको चामले किन्नुपर्नै मुलुक बनिसक्यो । यस्तो मुलुकको आर्थिक प्रगति ओह्रालो लाग्दैछ र सरकार भन्छ– प्रतिव्यक्ति आय हजार डलरबाट नाघिसक्यो ।
अर्थविदहरु आर्थिक सूचकांक सकारात्मक छैनन्, अतासलाग्दो नकारात्मक देखिन्छ । समष्टिगत आर्थिक सूचकांकहरू सीवीएसद्वारा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय बढेर १४ सय डलर पुगेको दावी गरिएको छ । यो तथ्यांकको होइन, मिथ्यांकको चमत्कारबाहेक केही पनि हुनसक्दैन । जब देशका अधिकांश समुदाय विहान खाए, साँझ भोकै सुत्छ, साँझ खाए विहान भोकै काममा जान्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको स्थिति पनि नाजुक छ । भूकम्पग्रस्त समुदाय ३ वर्षपछि पनि च्यातिएको त्रिपाल र प्वाल परेको जस्तामुनी बाँचिरहेका छन् । उद्योगधन्दा, बन्दव्यापारमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । यो स्थितिमा, यस्तो भोकानांगाको मुलुकमा सरकारले हावादारी गफ गरेर प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो भन्नु भ्रममात्र हो ।
हुनसक्छ, केही नवधनाध्य जन्मेका छन् । राजनीति र जागीरदारहरु नवसामन्त बनेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार चलनचल्तीमा पठाएका नोटहरु बजारबाट गायब छन् । केही व्यक्तिको हातमा अर्थतन्त्र छ, तिनैले अकूत सम्पत्ति कमाएका छन् । एउटै डालोमा हुनेखाने केही र हुँदा खाने अधिकांशलाई हालेर प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो भनेको होला, यो गलत छ ।